Ady amin’ny Covid-19: handraisana marary 200 etsy amin’ny CCO Ivato | NewsMada
Ady amin’ny Covid-19: handraisana marary 200 etsy amin’ny CCO Ivato
Foibe maromaro ny hosokafana handraisana mararin’ny Covid-19 eto Antananarivo. Afaka mandray marary hatramin’ny 200 izany toerana izany. Haparitaka eny amin’ny CSB ihany koa ny fitsaboana sy ny CVO mba tsy ho betsaka intsony ny “cas grave”.
Tapaka, nandritra ny filankevitry ny minisitra natao tamin’ny alalan’ny visioconférence, ny alarobia teo, fa hosokafana handraisana ireo mararain’ny Covid-19 ny etsy amin’ny CCO Ivato, manomboka androany. Afaka handray ireo ahitana soratr’aretina, araka izany, eny an-toerana ary hahazaka marary hatrany amin’ny 200 any satria efa nasiana fandaminana sy narafitra ho amin’izay ny fotodrafitrasa ao anatiny. Efa miatrana ireo mpitsabo sy ny mpiasan’ny fahasalamana ma­nodidina ny 25 ka hatramin’ny 55 handray an-tanana ireo marary. Tsy maharaka ny manampahaizana miandraikitra ny valanaretina ka izay ny antony hampivondronana amin’ny toerana iray ireo marary ahafahana mikarakara azy tsara.
Nilaza koa ny minisitry ny Kolontsaina sy ny serasera, Andriatongarivo Lalatiana, omaly, fa hosokafana ihany koa ny LTP Alarobia handraisana ireo mararin’ny Covid-19.
Anosiala sy Village Voara no handraisana ny “cas grave”
Voarakitra tao anatin’ny tatitry ny filankevitry ny minisitra, ny alarobia teo, ihany koa fa natokana ho an’ny «cas grave» ny hopitaly eny Ano­siala. Misy toerana efa nohajarina ihany koa ao amin’ny Village Voara ahafahana mandray ireo tena marary mila «oxygène» tafiditra hatrany ao anatin’ny “cas grave”.
Etsy andaniny, haparitaka eny anivon’ny CSB ihany koa ny CVO sy ny fanafody fitsaboana ny Covid-19 tsy hahatonga ny marary ho lasa “cas grave”.